တေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံပါ ၃ ဦးအား ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီ - MM Live News
တေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံပါ ၃ ဦးအား ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီ
October 9, 2019 MM Live
ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်းတွင် တရားစွဲဆိုထားသော တေးသံရှင် ဖြိုးပြည့်စုံပါ ၃ ဦးအား ဓာတုဗေဒဝန်ရုံးမှ ပြန်ကြားချက်အရ မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်ခြင်းအရလည်းကောင်း …….
ဥပဒေမှ တရားစွဲဆိုရန် မသင့်ကြောင်း အကြံပြုချက်အရလည်းကောင်း ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီ မိနစ် ၃၀ အချိန်က ကျင့် ၁၆၉ အရ အချုပ်မှ လွှတ် လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။မေငယ်
ဖြိုးပြည့်စုံတို့က အပြစ်မရှိလို့ လွတ်သွားတာပါဟု ဗဟန်းမြို့နယ်မှုးပြော…..
အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်နှင့် သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးကို ယနေ့ ညနေ ၃နာရီခွဲအချိန်က လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲမှုးသိန်းဝင်းက အတည်ပြုသည်။“လွတ်ပေးလိုက်တာထက် အပြစ်မရှိလွတ်သွားတာပါဗျာ။
၃ နာရီခွဲလောက်က လွတ်ပေးလိုက်တာပါ။ ဥပဒေအရ လွှတ်ရမယ့်ကိစ္စရှိလို့ လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော် အဲလောက်ပဲဖြေပါရစေ။ ကျွန်တော်ချည်းပဲ လွှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဥပဒေကြောင်းအရ လွှတ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပြီး ဥပဒေနဲ့ အညီလွှတ်တာနော်။
ဗရမ်းဗတာလွှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး”ဟု ရဲမှုးသိန်းဝင်းက ပြောသည်။အောက်တိုဘာ ၇ ရက် ညနေက မြန်မာပလာဇာတွင် ဖြိုးပြည့်စုံ ၊ ငြိမ်းချမ်းကို နှင့် ရော်နီစန်းလွင်တို့ကို မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ေတးသံရွင္ ၿဖိဳးျပည့္စုံပါ ၃ ဦးအား ျပန္လႊတ္လိုက္ၿပီ
ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ တရားစြဲဆိုထားေသာ ေတးသံရွင္ ၿဖိဳးျပည့္စုံပါ ၃ ဦးအား ဓာတုေဗဒဝန္႐ုံးမွ ျပန္ၾကားခ်က္အရ မူးယစ္ေဆးဝါးမဟုတ္ျခင္းအရလည္းေကာင္း …….
ဥပေဒမွ တရားစြဲဆိုရန္ မသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္အရလည္းေကာင္း ယေန႔ ညေန ၃ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္က က်င့္ ၁၆၉ အရ အခ်ဳပ္မွ လႊတ္ လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ေမငယ္
ၿဖိဳးျပည့္စုံတို႔က အျပစ္မရွိလို႔ လြတ္သြားတာပါဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မႈးေျပာ…..
အဆိုေတာ္ၿဖိဳးျပည့္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးကို ယေန႔ ညေန ၃နာရီခြဲအခ်ိန္က လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲမႈးသိန္းဝင္းက အတည္ျပဳသည္။“လြတ္ေပးလိုက္တာထက္ အျပစ္မရွိလြတ္သြားတာပါဗ်ာ။
၃ နာရီခြဲေလာက္က လြတ္ေပးလိုက္တာပါ။ ဥပေဒအရ လႊတ္ရမယ့္ကိစၥရွိလို႔ လႊတ္ေပးလိုက္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အဲေလာက္ပဲေျဖပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္ခ်ည္းပဲ လႊတ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လႊတ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔ အညီလႊတ္တာေနာ္။
ဗရမ္းဗတာလႊတ္တာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ရဲမႈးသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ ညေနက ျမန္မာပလာဇာတြင္ ၿဖိဳးျပည့္စုံ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းကို ႏွင့္ ေရာ္နီစန္းလြင္တို႔ကို မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
စိုက်ပျိုးရင် တစ်ရာသီကို မြန်မာငွေသိန်းရာချီ ဝင်ငွေရနိုင်ပြီး စားသုံးရင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တဲ့ ကြာစွယ်​ / ကြာမြစ်​
ကျွန်တော်ရဲ့ ‘မင်္ဂလာဦးည’ က ဖြစ်ရပ်ကလေးပါ….
အဘိုးအဘြားေတြကို ေတာင္းရမ္းခိုင္းျပီး ခိုင္းစားေနတဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ဂိုဏ္းတခုကို က်ေနာတို့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ႕ျပီ။
February 17, 2019 MM Live News
(၁၅) နှစ်အရွယ် ခယ်မကို လယ်တဲထဲမှာ (၃) ကြိမ်ပြုကျင့်တဲ့ ခဲအို
November 16, 2019 MM Live
ပုိက္ဆံအိတ္ လုေျပးတဲ့သူကုိ ေနာက္က ဆုိင္ကယ္နဲ႔ လုိက္တုိက္ၿပီး အမိဖမ္းတဲ့ အာဂအမ်ဳိးသမီး (ရုပ္သံဖုိင္)
December 22, 2018 MM Live News
အိပ်မက်ထဲမှာ သူ့ကို တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုအရမး်လွမး်နေမှန်းသိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး
December 9, 2019 MM Live
ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်းမှာ မနားသင့်၊ မရပ်သင့် ၊ မစားသင့်တဲ့နေရာများ…
တစ်နာရီ 8000 နဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းဘယ်သွားသွား လိုက်ပို့ပေးတယ်နော်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လေး….
အအေးလှိုင်းဖြတ်ချိန် ည၁၁နာရီကျော် လမ်းဘေးမှာ အိမ်ခြေမဲ့ အိပ်နေသူတွေကို အနွေးဓာတ်လိုက်ပေးတဲ့ ချစ်စရာအဖွဲ့လေး
မနက်(၁)နာရီမှာ ရေမွှာပေါက်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်ကို ည (၈း၃၀)နာရီမှ ခွဲစိတ်လိုက်သောအခါ
December 9, 2019 December 9, 2019 MM Live
( ၇ )သား သမီး မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ဒီဇင်ဘာလ (၈)ရက်မှ ၊ (၁၅)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန်